MALAGASY Archives | La dépêche de MadagascarLa dépêche de Madagascar
FANOLANANA NIARO VONO TENY ALAROBIA AMBONILOHA : SAKAIZAN’ILAY TOVOVAVY TEO ALOHA SY TOVOLAHY TSY AMPY TAONA IRAY NO NAHAVANON-DOZA
Roalahy 19 sy 17 taona no voatondro ho tompon’antoka tamin’ny fanolanana sy famonoana ho faty tovovavy 19 taona izay monina eny Alarobia Amboniloha, ny 31 desambra teo. Sakaizan’ity farany teo aloha ny iray amin’izy roalahy ireo Olon-tiany teo aloha sy tovolahy tsy mbola manana karapanondro ireo voarohirohy ho nanolana sy nanala ny ain’ilay tovovavy 19…
Nanaka-danitra ireo kodiarana ary voatsindry tao ambany kosa ny tafo. Izany no nanjo ny fiara tsy mataho-dàlana izay nentin’ny depiote Razakamady nandalo teo atsimon’ny tetezan’Andriamamovoka, distrikan’Ambositra, hihazo an’Antananarivo, omaly vao maraimbe. Mpivady no sendran-doza niaraka taminy tao anatin’io fiarakodia io ka nilaza ho naheno fipoahana mafy avokoa izy ireo. “Ny iray tamin’ireo kodiarana no henonay…
FANAFIHANA TENY ANDAVAMAMBA : LASAN’IREO ENINDAHY NY VOLA MATY REHETRA TAO AMIN’ILAY FIVAROTAM-PANAFODY
Andian-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana no nanao befiavy tao amina farmasia iray teny Andavamamba, omaly tolakandro nanodidina ny tamin’ny 3 ora. Toy ny tselatra no nandraofan’izy ireo ny vola tao amin’ny fitoerany. “Tao ny nanambana basy, nisy ireo nampihorohoro ny mpiasan’ny fivarotram-panafody no sady nandratra azy ireo. Ny iray tamin’izy ireo kosa tsy nanao afa-tsy ny naka…